Sida uu BBC-da u xaqiijiyey Maxamed Daahir oo ka tirsan mas'uuliyiinta jabhadda ONLF oo ku sugan magaalada Johannesburg, Qalbi Dhagax waxa uu Gaalgacayo tagay galinkii dambe ee maalintaas, isla habeenkiina waxaa qabtay ciidammada Galmudug.
"Markii ay NISA la wareegtay anaga neefta ayaa naga soo fuqday, waxaanan u qaadanay in NISA ay u dhaanto Galmudug, oo uu ku nabad gali doono gacanta dowladda Federaalka oo aan kalsooni aad u badan ku qabnay, balse taas ma dhicin, oo waxaa dhacday nasiib darradii ugu weyneyd oo ah in ninkii loo gacangaliyo Itoobiyo" ayuu yiri Maxamed Daahir.
Markii Muqdisho la keenay ayaa waxaa jirey iskudayo ay qeyb ka ahaayeen mas'uuliyiin dowladda federaalka oo ku saabsan in lasoo daayo Qalbi Dhagax, balse waxa ay illo wareedyo kala duwan xaqiijiyeen in taariikhda markii ay ahayd 27-di Agoosto diyaarad loo saaray Itoobiya sida ay sheegtay jabhadda ONLF oo war qoraal ah soo saartay.
Ilaa 5 sargaal oo kale oo sarsare ayaa 20kii sano ee lasoo dhaafay laga qabtay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo laga qabtay magaalooyinka Hargeysa, Boosaaso, Gaalkacayo iyo Guriceel sida ay sheegeen ONLF. Waxaa sidoo kale jirey dad jabhadan ka tirsanaa balse aanan wax mas'uuliyad haynin jabhadan oo iyagana la dhiibay.
Dowladda federaalka Soomaaliya wali wax jawaab rasmi ah kama aysan bixinin qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax marka laga reebo taliyaha NISA Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) iyo Ra'isulwasaare Xasan Cali Kheyre oo mar meel fagaaro ah lagu weeydiiyey sheegay in ay ka gaabsanayaan arrinka.
"Waa arrin xasaasi ah, mana jirto cid hadda ka hadli karta, waxaanan ka hadlaynaa waqtiga ku habboon" ayuu yiri Sanbaloolshe oo u muuqday in uu xaqiijinayay in ay dowladda wax ka ogtahay arrinka Qalbi Dhagax.
Image caption ONLF ayaa inta badan laga saaray deegaanada Itoobiya balse waxay taageeryaal badan ku leeyihiin qurbajoogta
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud oo BBC-da la hadlay ayaa yiri "Haddii aan nahay baarlamaanka Soomaaliya waan baaraynaa arrinkan, ciddii ay ku cadaatana sharciga ayaa lala tiigsanayaa".
Aragtida koowaad ee la'isku wada raacsanyahay ayaa ah in aysan meelna sharciga Soomaaliya kaga qorneyn in qof Soomaali ah oo gudaha dalka ku sugan loo dhiibo dowlad kale.
Waxaa kale oo jira baaqyo loo dirayo labada aqal ee baarlamaanka in ay fadhi ka yeeshaan Qalbi Dhagax , go'aamana kasoo saaraan, laanta fulintana ay ku qasbaan in ay ka jawaabto sida ay wax u dhaceen.
Dadka baaqa u direy madaxda dowladda waxaa ka mid ah xaaska Qalbi Dhagax oo lagu magacaabo Khadro Maxamed Cabdi xili ay la hadashay warbaahinta, waxayna ka dalbatay madaxweynaha iyo Ra'isulwasaaraha in ay xoriyadiisa dib ugu soo celiyaan seygeeda.